Friends of MoeMaKa - Free Burma News Collection | Category | Protests | Page 4
Posted on June 2, 2015 by freeburma
ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ ကျောင်းသား ကျောင်းသူ ၇၀ ကို သာယာဝတီခရိုင် တရားရုံးမှာ ရုံးထုတ်ခဲ့ရာမှာ အဝေးသင်တက်နေတဲ့ ကျောင်းသူ ကျောင်း သား ၁၃ ဦးရဲ့ အာမခံလျှောက်ထားချက်ကို တရားရုံးက ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1dcoBfJ http://www.rfa.org
Posted in Education, Protests, Recently Read, RIghts	| Tagged Education, Feedly, IFTTT, Protests, Recently Read, RIghts	| Leaveacomment |
Posted on April 9, 2015 by freeburma
ပညာရေးဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်အထိ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမည်ဟု ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များပြော
အမျိုးသားပညာရေးဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ရန်အတွက် ညှိနှိုင်းအဖြေရှာနေခြင်းကို ကြိုဆိုကြောင်းနှင့် ပြင်ဆင်နိုင်ရန် ဆက်လက်ကြိုးစားမည်ဖြစ်ကြောင်း သာယာဝတီထောင်အတွင်း ဖမ်းဆီးခံထားရသည့် ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်များက ပြောသည်။
သတင်းအပြည့်အစုံ …………. http://ift.tt/1OdWXwg
ပညာရေးဥပဒေ ပြန်လည်ပြင်ဆင်နိုင်သည်အထိ ဆက်လက်ကြိုးပမ်းမည်ဟု ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်မျာ
via 7Day News Journal’s Facebook Wall http://ift.tt/1OdWV7E http://ift.tt/g8FRpY
Posted in Education, Protests, Recently Read	| Tagged Education, Feedly, IFTTT, Protests, Recently Read	| Leaveacomment |
အမျိုးသား ပညာရေးဥပဒေ ပြင်ဆင်ရေး သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြခဲ့ကြသည့် ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား တချို့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က လိုက်လံ ဖမ်းဆီးရာတွင် ဗမာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများ အဖွဲ့ချုပ် (ဗကသ) မှ ကျောင်းသူ မပိုပိုကိုလည်း ဧပြီ ၈ ရက်က ဖမ်း ဆီး လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
The post ဗကသ ကျောင်းသူ မပိုပိုကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး appeared first on ဧရာဝတီ.
via ဧရာဝတီ http://ift.tt/1OdWU3C http://ift.tt/1iYMpUI
Posted on April 7, 2015 by freeburma
လက်ပံတန်းဖြိုခွင်းမှုအပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ၆၉ ဦးကို ရုံးထုတ်
လက်ပံတန်းမြို့ ကျောင်းသားသပိတ်စစ်ကြောင်း အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းခံရပြီးနောက် သာယာဝတီ အကျဉ်းထောင်မှာ ဖမ်းဆီးခံထားရသူ ၆၉ ယောက်ကို လက်ပံတန်းမြို့နယ် တရားရုံးမှာ ဒီနေ့ ရုံးထုတ်ခဲ့ ပါတယ်။
via သတင်းများ http://ift.tt/1NRH7VZ http://www.rfa.org
သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းမှေ…
သာယာဝတီအကျဉ်းထောင်တွင် ဖမ်းဆီးခံထားရသော ဒီမိုကရေစီပညာရေး ပင်မသပိတ်စစ်ကြောင်းမှ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့် ၀န်းရံပြည်သူများအား တတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်မှုအဖြစ် လက်ပံတန်းတရားရုံး၌ ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ပြုလုပ်နေကြောင်း သိရသည်။
လက်ပံတန်းတွင် ဖမ်းဆီခံကျောင်းသားများကို ရုံးထုတ်မြင်ကွင်း
via Eleven Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1CfIsPX http://ift.tt/g8FRpY
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပေးပို့ထားသော အမျိုးသားပညာရေး ဥပဒေကြမ်းကို ဧပြီလ ၇ ရက်တွင် ကျင်းပသည့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် အစည်းအဝေးတွင် အတည်ပြုသွားမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးစောလှထွန်းက The Voice သို့ ပြောကြားသည်။
ယင်းဥပဒေကြမ်း အတည်ပြုနိုင်ရေးအတွက် ဒေါက်တာချမ်းငြိမ်း၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဒေါက်တာမောင်မောင်ဝင့်၊ ဒေါက်တာမြဦး၊ ပါမောက္ခ ဦးသန်းနွယ်၊ ဒေါက်တာခိုင်မြဲ၊ အငြိမ်းစား အခြေခံပညာညွှန်/ချုပ် ဦးဘိုဝင်းနှင့် ကော်မရှင်များ၊ တပ်မတော်သား လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များ၊ ပြင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းထားသူ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များက ဧပြီလ ၆ ရက်နေ့တွင် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီတွင် ကြိုတင်ညှိနှိုင်းခဲ့ကြကြောင်း ၎င်းကဆိုသည်။
“လေးပွင့်ဆိုင်က သဘောတူထားတဲ့ အချက်တွေကို အခြေခံပြီး ထည့်သွင်းဆွေးနွေးကြဖို့ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေကို တိုက်တွန်းလိုပါတယ်” ဟု မုံရွာတက္ကသိုလ် နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးပညာ ဌာန ကထိက ဒေါက်တာစိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းက ပြောကြားသည်။
အဆင့်မြင့်ပညာရေး ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ရန် လွတ်လပ်စွာ ရပ်တည်သော ကော်မတီတစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းပေးနိုင်သည်ဟူသော အချက်တွင် အမြဲတမ်းကော်မတီ မလိုအပ်ဟု ယူဆကြောင်း ဒေါက်တာစိုင်းခိုင်မျိုးထွန်းက ပြောဆိုသည်။
အမျိုးသားလွှတ်တော်မှ ပေးပို့ထားသော ပညာရေးဥပဒေကို ပြင်ဆင်သည့် ဥပဒေကြမ်းတွင် ပညာရေးမူဝါဒ ကော်မရှင် ဖွဲ့စည်းခြင်း၌ ဆရာသမဂ္ဂများမှ ရွေးချယ်သည့် နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်း မဟုတ်သည့် ပညာရှင်နှစ်ဦး၊ ကျောင်းသားသမဂ္ဂများမှ ရွေးချယ်သည့် ပညာရှင်နှစ်ဦး ထည့်သွင်းထားချက်နှင့် ကော်မရှင်မှ ဖွဲ့စည်းမည့် အမျိုးသားသင်ရိုးညွန်းတမ်း ကော်မတီ ဖွဲ့စည်းရမည့် အချက်အပါအဝင် ဥပဒေကြမ်းမှ အချက် ၂၃ ချက်ကို ပယ်ဖျက်၍ ၃၃ ချက်ကို ပြင်ဆင်ပြီး ပြည်သူ့လွှတ်တော် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီက ဧပြီလ ၂ ရက်နေ့တွင် အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
အဆိုပါ ပြင်ဆင်ခြင်း၊ ပယ်ဖျက်ခြင်းနှင့် အသစ်ဖြည့်စွက်ချက်များအပေါ် လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ၁၈ ဦးက ပြင်ဆင်ချက်အဆို တင်သွင်းထားပြီး ၎င်းတို့ အဆိုပြုချက်နှင့် ဥပဒေကြမ်းကော်မတီ၏ တင်သွင်းချက် ကိုက်ညီမှု မရှိပါက လွှတ်တော်တွင် မဲခွဲဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း ဦးစောလှထွန်းက ပြောကြားသည်။
ယင်းဥပဒေကြမ်း တစ်ခုလုံးကို ပြည်သူ့လွှတ်တော်မှ အတည်ပြုပြီးပါက ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်တွင် ထပ်မံအတည်ပြုချက် ရယူသွားရမည် ဖြစ်ကြောင်း ဥပဒေကြမ်း ကော်မတီဝင်များက ဆိုသည်။
via The Voice Weekly’s Facebook Wall http://ift.tt/1CfIpUu http://ift.tt/g8FRpY
Posted in Education, Protests	| Tagged Education, Feedly, IFTTT, Protests	| Leaveacomment |
Posted on April 1, 2015 by freeburma
ကျောင်းသားသပိတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူများအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဒီမိုက…
ကျောင်းသားသပိတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူများအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန် ဒီမိုကရေစီတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ သုံးဦးက MPC ရှေ့တွင် ဆန္ဒပြ
ဒီမိုကရေစီကျောင်းသားသပိတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူများ အားလုံးကို ပြန်လွှတ်ပေးရန်အတွက် မတ် ၃၁ ရက် ညပိုင်းက ဒီမိုကရေစီရေး တက်ကြွလှုပ်ရှားသူသုံးဦးက Myanmar Peace Center ရှေ့တွင် ဆန္ဒပြခဲ့ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးဆွေးနွေးပွဲသို့ အိတ်ဖွင့်ပေးစာတစ်စောင် ပေးပို့ခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဆန္ဒပြမှုကို ည ၇ နာရီခန့်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဒီမိုကရေစီရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူ သုံးဦးက“တရားမျှတမှုထွန်းကားပါစေ”၊ “သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားပြည်သူများအား ချက်ချင်းလွှတ်”၊ “လွတ်လပ်စွာ ထုတ်ဖော်ခွင့်မရှိဘဲ စစ်မှန်တဲ့ငြိမ်းချမ်းရေး မရနိုင်”၊ “အကြမ်းဖက်မှုကို အရေးမယူဘဲ ငြိမ်းချမ်းရေးကို မတည်ဆောက်နိုင်” စသည့် စာတန်းများ ရေးထိုးထားသည့် ကတ်ထူစက္ကူများကို ရင်ဘတ်တွင်ချိတ်၍ ဆန္ဒပြခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ကျောင်းသားသပိတ်နှင့် ပတ်သက်ပြီး ဖမ်းဆီးခံထားရသူများအားလုံး ပြန်လွှတ်ပေးရန်…
via Eleven Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1Gezkkz http://ift.tt/g8FRpY
Posted on March 30, 2015 by freeburma
via သစ်ထူးလွင် (နေ့စဉ်သတင်း) – Thit Htoo Lwin http://ift.tt/1Co4O58 http://ift.tt/Y2RpwJ
Posted on March 29, 2015 by freeburma
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့၊ ရန်ကုန်နှင့်နယ်မြို့အချို့မှ ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သူများကိုအမှုဖွင့်အ…
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့၊ ရန်ကုန်နှင့်နယ်မြို့အချို့မှ ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သူများကိုအမှုဖွင့်အရေးယူ (ရုပ်သံ)
မတ်လ ၂၇ ရက်နေ့၊ ရန်ကုန်နှင့်နယ်မြို့အချို့မှ ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သူများကိုအမှုဖွင့်အရေ�
via Eleven Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1D42YIG http://ift.tt/g8FRpY
Posted on March 27, 2015 by freeburma
မတ်လ ၂၇ (ယနေ့) ရန်ကုန်မြို့ Chatrium ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်နေသော International Press…
မတ်လ ၂၇ (ယနေ့) ရန်ကုန်မြို့ Chatrium ဟိုတယ်တွင် ပြုလုပ်နေသော International Press Institute (IPI) ညီလာခံ၌ ပြန်ကြားရေးဝန်ကြီး ဦးရဲထွဋ် အမှာစကား ပြောကြားနေစဉ် အဆိုပါ အခမ်းအနား တက်ရောက်သူများထဲမှ သတင်းထောက်တစ်ဦးက သတင်းထောက်များ ရိုက်နှက်၊ ဖမ်းဆီးခြင်း ရပ်တန့်ရေး စာတန်းကိုင်ဆောင်၍ ဆန္ဒထုတ်ဖော်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
via Eleven Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1F0Z56b http://ift.tt/g8FRpY
Posted in Press, Protests, Recently Read	| Tagged Feedly, IFTTT, Press, Protests, Recently Read	| Leaveacomment |
တော်လှန်ရေးနေ့ လှုပ်ရှားမှုအပြီး ဗကသကျောင်းသားများ ထပ်မံဖမ်းဆီးခံရ ဒီဗွီဘီ “မြို့…
“မြို့ထဲမှာ ဆန္ဒပြပွဲတွေပြီးတဲ့ အခါမှာ သက်ဆိုင်ရာ လုံခြုံတဲ့နေရာတွေ ပြန်သွားတဲ့အခါမှာ လမ်းမှာ လိုက်ဖမ်းတာ။ နောက်ဆုံးသိရသလောက် သိမ်ဖြူ မင်္ဂလာတောင်ညွန့် မဆလာစက်မှတ်တိုင်နား အဲဒီနားဝန်းကျင် လမ်းပေါ်မှာပဲ
via DVB TV News’s Facebook Wall http://ift.tt/1H5Hvyf http://ift.tt/g8FRpY
လက်ပံတန်းအကြမ်းဖက်မှု တရားခံဖော်ထုတ်ရေးနဲ့ ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေကို ချက်ချင်းလွှတ…
via RFA Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/19YNWsq http://ift.tt/g8FRpY
မြင်းခြံဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများ ဖမ်းဆီးခံရ (ရုပ်သံ)
သာယာဝတီထောင်မှာ ဖမ်းဆီးတရားစွဲခံနေရတဲ့ သပိတ်မှောက် ကျောင်းသားတွေနဲ့ ၀န်းရံပြည်သူတွေလွတ်မြောက်ရေးအတွက် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ မြင်းခြံမြို့နဲ့ ဧရာဝတီတိုင်းက မြို့ကြီးတွေနဲ့[…]
The post မြင်းခြံဆန္ဒပြ ကျောင်းသားများ ဖမ်းဆီးခံရ (ရုပ်သံ) appeared first on DVB.
via DVB | DVB http://ift.tt/1H5HoCK http://burmese.dvb.no
Posted on March 25, 2015 by freeburma
အမျိုးသားပညာရေးသပိတ်မှောက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံရသော ဒေသခံ…
အမျိုးသားပညာရေးသပိတ်မှောက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံရသော ဒေသခံ (၂၀)ဦးကို ကိုယ်တိုင်ခံဝန်ဖြင့်ပြန်လွှတ်
အမျိုးသားပညာရေးသပိတ်မှောက် ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီးခံရသော ဒေသခံ (၂၀
via Eleven Media Group’s Facebook Wall http://ift.tt/1Ite5Lm http://ift.tt/g8FRpY
Posted on March 20, 2015 by freeburma
ဖမ်းဆီးခံကျောင်းသားတွေ မိဘနဲ့ တွေ့ဆုံခွင့်ရရှိ လက်ပံတန်းမြို့ ကျောင်းသားသပိတ်စခ…
via RFA Burmese’s Facebook Wall http://ift.tt/1MR6atT http://ift.tt/g8FRpY
Posted on March 19, 2015 by freeburma
သပိတ်မှောက်ထားဝယ်ကျောင်းသား ၃ ဦးအား ရေး ရဲစခန်းမှ အမှုဖွင့်ထား
အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေအား ကန့်ကွက်သပိတ်မှောက်သည့် ထားဝယ်သပိတ်စစ်ကြောင်းမှ ကျောင်းသား ၃ဦးကို ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေး၊ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေ (ပုဒ်မ ၁၈) ဖြင့် ရေးမြို့နယ် ရဲစခန်းက မတ်လ ၁၆ရက်နေ့တွင် အမှုဖွင့် ထားကြောင်း ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးရုံးမှ သိရသည်။
အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် ကျောင်းသား ၃ဦးမှာ ထားဝယ် နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ကိုမင်းလွင်ဦး၊ ကိုဇင်မောင်ဖြိုးနှင့် ကိုသူရနိုင်တို့ ဖြစ်ပြီး၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ရက်နေ့တွင် ထားဝယ်မှ ရန်ကုန်သို့ ချီတက်စဉ် ရေးမြို့အရောက် ရန်ကြီးအောင်ရပ်ကွက်ရှိ စိုပြေလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့တွင် ပြည်သူများအား အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို ကန့်ကွက်သပိတ်မှောက်ကြောင်း ဟောပြောခဲ့သည့်အတွက် အမှုဖွင့်ခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
ဟောပြောစဉ်တွင် ထားဝယ် သပိတ်စစ်ကြောင်းနှင့်အတူ ရေးမြို့သို့ လိုက်ပါလာခဲ့သည့် ထားဝယ် ၈၈ မျိုးဆက် ငြိမ်းချမ်းရေးနှင့် ပွင့်လင့်လူ့အဖွဲ့အစည်းမှ လူထုဆက်ဆံရေး တာဝန်ခံ ဦးမိုးအောင်ကျော်က “ကလေးတွေ အနေနဲ့ မည်သူ့ကိုမှ မထိခိုက်စေဘူး။ အနှောင့်အယှက် မပြုခဲ့ဘူး။ ငြိမ်းချမ်းစွာ လုပ်ခဲ့တဲ့အတွက် တရားမစွဲသင့်ဘူး” ဟု မှတ်ချက်ပြုသည်။
ရဲတပ်ဖွဲ့ရုံးကမူ ကျောင်းသားများ သပိတ်မှောက် ဆန္ဒပြစုဝေးဟောပြောရန် ဆောင်ရွက်နေစဉ် ရေးမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးမိုးဇော်နိုင်နှင့် ရေးမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူး ရဲမှူးမြင့်သော် တို့မှ ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စီတန်းလှည့်လည်ခွင့် ဥပဒေနှင့်အညီ ခွင့်ပြုချက် တောင်းခံပြီး ခွင့်ပြုချက်ရရှိမှသာ စုဝေးဟောပြောရန် ရှင်းလင်းခဲ့သော်လည်း ထိုသို့ လက်ခံခြင်း မရှိဘဲ ဟောပြောခဲ့သည့်အတွက် အမှုဖွင့်ခြင်း ဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ထားဝယ် ကျောင်းသားများ ရေးမြို့တွင် ဟောပြောပြီးနောက် တစ်လကျော် ကြာမြင့်ခဲ့ပြီဖြစ်ပြီး နေရပ်သို့ ပြန် လည်ရောက်ရှိမှ ယခုကဲ့သို့ အမှုဖွင့်ခြင်းသည် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ အကွက်ချကာ လုပ်ဆောင်ခြင်း ဖြစ်သည် ဟု ရေးမြို့ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများက သုံးသပ်ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီလ ၈ရက်နေ့တွင် ထားဝယ် ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားဟောင်းများ စသည်တို့ လိုက်ပါပြီး ထားဝယ်နည်းပညာ တက္ကသိုလ်မှ ကျောင်းသူ ကျောင်းသား ၁၅ဦးတို့က ရေးမြို့သို့ ရောက်ရှိစဉ် အမျိုးသား ပညာရေး ဥပဒေကို သပိတ်မှောက်ကြောင်း လက်ဖက်ရည်ဆိုင်ရှေ့တွင် ၅မိနစ်ခန့် ဟောပြောပြီးနောက် ၅ မိနစ်ခန့် ထပ်မံချီတက်ကာ ရွှေဆံတော် စေတီတော်တွင် အောင်မြေနင်း သစ္စာဆို တိုင်တည်ကြသည်။
ထားဝယ်ကျောင်းသားများအား ရေးမြို့နယ်အတွင်းရှိ အရပ်ဖက် လူမှုအဖွဲ့အစည်းများ၊ ၈၈ မျိုးဆက် ကျောင်း သားများ စသည်တို့က မြို့အဝင်တွင် ကြိုဆိုကြပြီး၊ ရန်ကုန်သို့ ဆက်လက်ချီတက်စဉ်တွင်လည်း မြို့အထွက်ထိ လိုက်ပါပို့ဆောင်ခဲ့ကြသည်။
အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် ကျောင်းသား ၃ဦး၏ အမှုကို ရေးမြို့မ ရဲစခန်းမှ ရဲအုပ် ဆန်းဝင်းက စစ်ဆေးလျက် ရှိကြောင်း သိရှိရသည်။
via သတင်း http://ift.tt/18MNEDT http://ift.tt/1mP7bZA